Sorona Masina ny 22/12/2020 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 22/12/2020
Salamo 23, 7
Andrao ny lohanareo, ry vavahady! Asandrato ny tatao, ry varavarana fahagola, hidiran’ny Mpanjaka be voninahitra.
Andriamanitra ô, nitsinjo ny olombelona tafahitsoka ao amin’ny fahafatesana Ianao ka sitrakao ny nanavotra azy tamin’ny fiavian’ny Zanakao Lahitokana; enga anie izahay mpanompo tsy mendrika Anao, nefa mankatò ny nahatongavany ho nofo, mba ho mendrika hiombona anjara amin’ny Zanakao Mpamonjy anay.
Samoela 1, 24-28
Velom-pisaorana i Annà noho ny nahaterahan’i Samoela.
Tamin’izany andro izany, nony efa notazan’i Annà, reniny, i Samoela, dia nentiny niakatra niaraka taminy, sady naka vantotr’ombilahy telo sy lafarina iray efah ary divay eran’ny siny hoditra izy; dia nentiny nankao an-tranon’ny Tompo tao Silao izy. Mbola tanora kely ny zaza. Dia novonoin’izy ireo ny vantotr’ombilahy iray, ary nentiny nankao amin’i Helî ny zaza. Ka hoy i Annà: “Aza mahafady, tompoko. Raha velona koa ny ainao, tompoko, dia izaho ilay vehivavy nitoetra teto akaikinao nivavaka tamin’ny Tompo. Ny hahazoako itý zaza itý no nangatahiko ary neken’ny Tompo ny fangatahana nataoko taminy. Koa intý koa aho, mahafoy azy ho an’ny Tompo; nafoy ho an’ny Tompo izy amin’ny andro hiainany rehetra.” Dia niankohoka teo anatrehan’ny Tompo izy ireo.
— Izany àry ny tenin’ny Tompo. — Hiasorana anie Andriamanitra!
Salamo: 1 Sam. 2, 1. 4-5. 6-7. 8
Endrey ny hafaliako manana ny Tompo! Ny lohako nitanondrika mitraka. Ka indro aho misoka-bava hiaro tena. Mifaly aho, ry Tompo, fa voavonjinao.
Ny olo-mahery tapaka tsipîka, ny osa kanefa miatrana aman-kery. Ny voky nasainy miasa mikarama, ny noana kanefa homana tsy miasa. Ny momba nomeny zanaka amam-para, kanefa ny maro anaka malazo.
Mamono ary koa mamelona ny Tompo: mampidina sy mampakatra ny maty, mampanana sy mandevona ny Tompo, mampietry Izy fa manandratra avy hatrany.
Alàny tsy ho eo am-bovoka ny ory, akariny avy eo am-pako ny mahantra, ka indro nomeny toerana mpanjaka, tolorany fiketrahana mihaja.
Ry ilay Fahendrena izay mandahatra ny zavatra rehetra amin-kery sy amin-kalemem-panahy, avia mba hampianatra anay ny lalan’ny fahamarinana.
Lk. 1, 46-56
Nahefa be tamiko Ilay Mahefa.
Tamin’izany andro izany, i Maria nisaotra ny Tompo nanao hoe: “Mankalaza ny Tompo ny fanahiko; ary faly sy ravo amin’Andriamanitra Mpamonjy ahy ny foko, fa notsinjoviny ny fiambanian’ny ankizivaviny. Fa indro, hatramin’izao, dia hataon’ny taranaka rehetra hoe: sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay Mahefa. Ary masina ny Anarany, sady amin’izay matahotra Azy hatramin’ny taranaka fara mandimby ny famindram-pony. Nahefa asa mahery tamin’ny sandriny Izy; dia nampihahafiny izay niavonavona tamin’ny fisainan’ny fony; naongany hiala tamin’ny fiketrahany ny mpifehy, fa ny ambany kosa nasandrany; ary ny noana novokisany soa, fa ny mpanankarena kosa, dia nampodîny nitondra tanam-polo. Niahy an’i Israely mpanompony Izy, fa tsy hadinony ny famindram-pony tamin’i Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka ny efa voalazany tamin’ny razantsika.”
Nitoetra tokony ho telo volana tao amin’i Elizabeta i Maria vao nody tany an-tranony.
Tompo ô, miantehitra amin’ny fitiavanao izahay tafangona nitondra fanatitra eto amin’ny ôtelinao masina; ka enga anie hanadio anay ny fahasoavanao mba ho afa-doto izahay manompo Anao amin’izao Sorona masina izao.
Lk. 1, 46. 49
Mankalaza ny Tompo ny fanahiko satria nanao zava-dehihe tamiko Ilay Mahefa.
Ny Kômonio noraisinay anie, ry Tompo, hankahery anay hanao asa soa hoentinay mitsena ilay Mpamonjy ho avy sy mandray ny valisoa any amin’ny hasambarana mandrakizay.